Maitiro ekuwedzera toni yekurira mune iOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekuwedzera yeti ringtone mu iOS 9
Chinhu chinonakidza vazhinji varidzi ve smartphone kugona kuisa tsika toni. Mubvunzo uyo waunowanzotibvunza ndewe maitiro ekuwedzera tsika toni muIOS 9. Mhinduro inokurumidza uye inosetsa ingave "yakafanana neiyo iOS 8", asi haisiyo mhinduro yatinoda kukupa, saka tichakudzidzisa nzira ina dzakasiyana kuitira kuti ugone kuseta chaunofarira zvakanyanya se ringtone. Kunyangwe ini ndichiona kuti mazhinji eaya matoni haazove akanaka sezvaunotarisira, asi ichokwadi zvakare kuti kune mamwe akakosha. Muchirongwa ichi tichakurudzira zvina nzira dzakasiyana dzekugadzira ma ringtone e iPhone yako.
1 Maitiro ekuwedzera yeti ringtone mu iOS 9
1.1 Ndi iTunes
1.4 Nemapurogiramu kubva kuApp Store
2 Ungachinja sei ringtone yeWhatsApp kana Facebook
Ini ndinotanga neyiyi nzira nekuti zvinoita kwandiri sezviri nyore uye zvinoshanda kune isu tese tinogona kuisa iTunes, vanova OS X neWindows vashandisi.
Tinosarudza rwiyo kubva iTunes.
Isu tinoita cmd + io kurudyi tinya kuimba uye nekuenderera mberi wana ruzivo.
Ngatiendei kune iyo tab mikana.
Isu tinoratidza iyo kutanga uye yekupedzisira poindi. Kunyanya kuisa makumi mana, kunyangwe ndaizoisa chimwe chinhu zvishoma.
Takatamba pa kubvuma.
Isu tinoitazve cmd + io kurudyi tinya, asi panguva ino tinosarudza Gadzira AAC vhezheni. Tichaona kuti tinotevedzera sei rwiyo, asi iyo nyowani ichave nenguva yatakarongedza mudanho rechitatu.
Tinodhonza iyo nyowani rwiyo kudesktop.
Le isu tinoshandura kuwedzerwa kubva m4a kuenda m4r.
Tinoita tinya kaviri pane iyo nyowani faira uye isu tichaisa zvakananga muTones chikamu cheTunes.
Pakupedzisira, zvine musoro, tichafananidza ne iPhone yedu.
Dambudziko guru randinoona neiyi sisitimu ndeyekuti hazvigoneke kuwedzera kupera mukati kana kunze, chimwe chinhu chinobvumira kuti toni ive nani mune dzimwe nguva.
Iyi ndiyo nzira yangu yekurebesa. Ndanga ndichi "tamba" nerudzi urwu rwechirongwa kwenguva yakareba uye kwandiri ndiyo yakapusa. Uye zvakare, sezvo GarageBand iri yakazara odhiyo yekurekodha uye yekugadzirisa chirongwa, tinogona kuwedzera mhedzisiro yatinoda, kunyangwe chinhu chakanakisa ndechekuti isu tinongowedzera kupera-mukati uye kupera-kunze.
Ndisati ndatsanangura maitiro akareba andinowanzoshandisa, ndaida kukuudza kuti pane imwe nzira yechipiri (iyo kune vazhinji ndiyo ichave yekutanga) kugadzira toni neGarageBand uye iri nyore, asi ini handizvifarire. Ehe pachinzvimbo chekusarudza Empty Project isu tinosarudza Tone mudanho 2, tinogona kuigadzira nekukurumidza zvakanyanya. Isu tichafanira chete kudhonza iyo wave (nhanho 5) kusvika pakutanga kwezvose, ipa Kugovana uye sarudza "Rwiyo kuna iTunes ..." GarageBand inozo gadzirisa rwiyo rwacho pasi pemasekondi makumi mana.
Isu tinogadzira nyowani Empty chirongwa.
Isu tinosarudza Rekodhi kuburikidza nemakrofoni kana kuiswa pamhepo.
Tinodzvanya pa Dza.
Tinodhonza odhiyo mukati mehwindo GarageBand uye tinofambisa mafungu kuenda pakutanga kwezvose.
Isu tinogadzira odhiyo. Kuti tiite izvi, tinobaya pafungu kaviri kuti tione mupepeti pazasi.
Kana izvo zvatinoda kudzima zvatisingade, mugero kuzasi, tinodzvanya apo isu tinofambisa iyo saruro yekusarudza chidimbu chekubvisa (tinoibvisa na cmd + X). Zvandinoita kubvisa chidimbu chidiki chiri mushure memagumo chandinoda toni yangu. Kana ndangobvisa chidimbu chemafungu, muhwindo repamusoro ndinogona kutobvisa zvese zvakasara nebhatani rekudzima.
Ipapo tinogona gadzira iyo inopera-mukati uye inopera-kunze. Kuti tiite izvi tinobata kwaunoona mumufananidzo, izvo zvichatibvumira kuti tione vhoriyamu mutsara. Ipapo ini ndinokurudzira kugadzira mapoinzi maviri: imwe patinoda kuti iyo fade itange uye imwe kumagumo, sezvaungaona mumufananidzo.
Pakupera kwezvose mucherechedzo wekuguma kwenziyo yakavanzwa kwazvo. Unofanira dhonza iyo Triangle yechimurenga kusvika kumagumo ezvedu zvatakarongedza.
Chinhu chinotevera kuenda kuShare uye sarudza "Ringtone to iTunes ...". ITunes ichavhura otomatiki uye toni ichatanga kutamba.
Iye zvino isu tinongofanirwa kuzvitumidza zita (kana tichida) mu iTunes uye fananidza inzwi ne iPhone yedu.
Sezvazvinotaura Felipe mune zvakataurwa, kune zvakare webhusaiti yekugadzira tsika toni. Ini ndinofungidzira kuchave nezvimwe, asi ini ndakazviedza uye zvinoita kunge zvakapusa uye nekukurumidza kushandisa. Iyo webhu ndeye Audiko uye zvakare ine chishandiso muApp Store, asi iwe unofanirwa kugovana matauroni ne iTunes uye wozoidzosera ku iPhone. Kana iwe uchifanira kushandisa komputa, zvirinani kuti uzviite zvakananga kubva pawebhu. Kugadzira toni ine Audiko webhu iwe unofanirwa kuita zvinotevera:
Ngatiendei kune iyo peji http://es.audiko.net
Tinodzvanya pa Load.
Tinosarudza rwiyo kubva kwatinoda kutora toni.
Kana ndapedza kurodha, tinofamba kubva kumakona ezasi kusarudza chikamu chatiri kuda, vachirangarira kuti ivo vanofanirwa kuve isingasviki makumi mana masekondi.
Tinoratidza, kana tichida, kupera mukati nekunze.
Tinobaya pa "Gadzira ringtone"(Ndo zvandakaverenga, handizive kana kuri kukanganisa kubva kwandiri kana kubva pawebhu)."
Ipapo tinosarudza iPhone.
Tinobaya pana Dmutoro.
Pakupedzisira, senguva dzose, isu tinowirirana toni neiyo iPhone kuburikidza iTunes.
Nemapurogiramu kubva kuApp Store
Icho chinhu chandisina kumbobvira ndamboita uye handifunge kuti ndichazomboita neiyo GarageBand system, asi ini ndinotaura nezvazvo senge sarudzo. Isu tinongofanirwa kutsvaga "ringtone", "Ringtone maker", "Gadzira matoni" uye zvinhu zvakafanana muApp Store uye iwe uchaona matani ekushandisa kwayo. Kune akawanda akasununguka, mazhinji acho, asi ane paanogumira uye mashoma mashandiro, angangoita ese. Sezvandareva, ndinozvitaura senzira, asi kazhinji tichazoshandisa iTunes kana tiine iPhone, saka handifunge kuti iyi ndiyo sarudzo yako. Ini ndinokusiira iwe maviri anonyanya kushandiswa.
Heino runyorwa rwematani andakazvigadzirira ini nevamwe akumbirwa:
Dhiragoni Bhora Simbi
Dhiragoni Bhora Z Simbi
Alex Kidd achidya
Ungachinja sei ringtone yeWhatsApp kana Facebook
ZveCchinja matauriro eWharsappIwe unofanirwa kuenda kuZvirongwa zveWhatsApp pachayo, zviziviso Mutsva meseji kana meseji yeboka, ipapo unoshandura matauriro.
The Facebook Inogona kuchinjwa mukati meiyo iOS marongero, ipapo iwe uchave nesarudzo yekushandura matauriro ezaziso ezvekushandisa kwakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuwedzera yeti ringtone mu iOS 9
Yakanaka dzidziso, yakanyatsotsanangurwa nhanho nhanho. Ini ndichaedza Garage, nekuti kusvika parizvino ndakazviita neTunes sezvaunotsanangura munzira yekutanga.
Kunyange zvakadaro ini ndichiri kuzviona zvinosuwisa kuti Apple haibvumiri "natively"
Pablo, ndinofunga ndiwe munyori akanakisa nekure uye chinangwa chikuru, ramba wakadaro, ndapota.
Pindura kuna Fernando (@Garza_Real)
Dzidziso dzakanaka kwazvo kusvika pari zvino ini ndinoshandisa audiko pawebhusaiti yako, ndinoirodha pasi kune pc uye ndinowirirana ne iTunes. maererano
Mhoro Felipe. Zvinoita kunge imwe sarudzo yakanaka. Nemvumo yako, ndinoiwedzera 😉
ndapota pablo, zvese zvinobatsira zvinofanirwa kugoverwa. maererano
Kana iwe uri vashandisi vejailbreak iwe unayo zviri nyore kwazvo ... nemaunlimtones.
Unogona zvakare kuridhawunirodha nemaunlimtones pane jailbroken iPhone uye wochinjisa kune iyo pc ine itools-mhando zvirongwa, uyezve unogona kuzvifananidza ne iTunes uye iwo matoni anoshanda kune chero iPhone isina jailbreak ...
Buaaaa kazhinji tostón uye kuti haana kunditsanangurira sezvandaida.
Gerardo Sanchez akadaro
Nhanho yekutanga ichiri kushanda here? Ini ndinoita izvi paMAC yangu uye ndinokanya kaviri pairi uye iyo m4r faira inotamba muMUZIMU
Mumwe munhu aigona kunditsanangurira kuti nei izvi zvichiitika?
Pindura Gerardo Sanchez
Zvakawanda kwazvo nezvekurira ringtone
ruzivo rwenhema hapana sarudzo Gadzira AAC vhezheni
Ini ndichangotenga IPhone SE uye nematanho iwayo hazvigoneke. Sarudzo dzinowanikwa mumahwindo akaratidzirwa hadzisi idzo ...
Uye iyo rondedzero yematani isina chinhu, ini handina mukana wekuenderana uye handikwanise kuteedzera nekunamatira iringoni mushure mekunge ndacheka uye ini ndinokwanisa kushandura kuwedzerwa ku rm4
Chinhu chakareruka ndechechirongwa cheTwistedwave, chinogona kutovhura mp4 mavhidhiyo senge odhiyo uye nekuchinjisa kumhando dzakasiyana dzemafomati,
kana ichishanda asi kugadzira vhezheni acc haisi nebhatani chairo, unofanirwa kusarudza rwiyo wobva wadzvanya pafaira (kumusoro kuruboshwe) uye mukudonhedza pasi sarudza shandura wobva aac. Gadzira faira neiyo nguva nyowani yakasarudzwa uye iro rwiyo rwiyo zita, ruchizvuzvurudza kudesktop, regedza zita rekuwedzera (F2) (inokukumbira kuti usimbise kuti iwe unoda kuchinja kuwedzera, pinda gamuchira gamuchira) uye ndizvozvo. Unganidza iPhone uye enzanisa matoni (sarudza dhairekitori iro faira riripo. Kukadzi 2016
Kuenzanisa, OnePlus 2 vs iPhone 6